Umqolo - سند الظهر - Umboniso Oyoun | Inkcubeko yokucinga kwakhona
Oktobha 22, 2021 - Oktobha 30, 2021
« UMBUZO - سند الظهر - Vernissage
Uncwadi olwahlukileyo # 4 -Iqela lokukhulula »
"Umqolo" ngumboniso weendlela ezininzi ngumculi waseLebanon uMazen Khaddaj. Umboniso yingqokelela yemidlalo yevidiyo, ufakelo lweendlela ezininzi, kunye namaxwebhu abonisa ubudlelwane kunye notata wakhe, kunye nokusweleka kwakhe ngoDisemba 2020. Emva kwemfazwe ende kwaye inzima neCOVID19, utata wakhe wanikezela kwaye wamshiya eneminyaka engamashumi amathandathu -Ntathu. Ukudlula kwakhe kwakunjengonyikima eyashukumisa ubunyani beMazen yamshiya eyaphukile.
Zibhukishe ixesha oza kulityelela ngalo mboniso Apha
Utata kaMazen, uMelhem, wayengutata wendabuko ongumArabhu owayesebenza ngokungakhathali ekondla usapho. Iminyaka emininzi, de wasweleka, wayesebenza yonke imihla kwivenkile yakhe e-Aley, kwiNtaba yeLebhanon. UMelhem ebeyindoda yokholo kwaye ehlonitshwa kakhulu kwidolophu yakhe, ebengqongqo nakubantwana bakhe kwaye efuna ingqwalaselo enkulu. Wayenobubele kusapho nakwizihlobo zakhe kwaye ebathanda kakhulu, kodwa wazifihla iimvakalelo zakhe phantsi komgangatho wakhe onzima. Wayezidla kakhulu ngobhuti kaMazen kuphela kunye nomdala, uHassan. UHassan watshata, waba nomntwana, waqhuba ishishini losapho.
"Ndingamxelela njani utata wam ukuba ndingubani? Besele ndibonakala ngokwahlukileyo, ndinxibe iimpahla eziqinileyo kwaye ndinento yokwenza nezinto zokuzonwabisa ezingezizo ezesiko. Ndandithambile kwaye ndinobuthathaka kwaye ndigcina isini sam sifihlwe kwigunjana eliqinileyo. UMelhem wayehlala enxulumana nendlela yam yokuphila kwaye ujongeka ngendlela yokuphila yomzobi. Wayengenamdla kubugcisa bam, kodwa wayendikhathalele kwaye endixhasa ngemali kwiinzame zam "
"Umqolo" kukuqhuma kwentlungu kunye nezinye iimvakalelo ezingaphunyezwanga ezivela ebuntwaneni bukaMazen ukuya kwiminyaka yakhe yobudala. Ngalo mboniso, uvula umhlaba wakhe kwaye ubonise ibali lenkwenkwe yama-Arabhu kunye noyise olondolozayo. Umboniso ukhumbula utata wakhe amthandayo, uMelhem Khaddaj.
UMazen Khaddaj (b. 1985) ligcisa leLebhanon elinamacandelo ahlukeneyo asebenza ukupeyinta, ukusebenza, ubugcisa bevidiyo, kunye nofakelo. Ufumene isidanga sakhe seBachelor of Arts kwi-Graphic Design e-American University of Science and Technology eBeirut ngo-2008. Imvelaphi yakhe ibandakanya ukusebenza njengoMlawuli wezoBugcisa kwiinkampani zentengiso zamazwe aphesheya kangangeminyaka eliqela ngaphambi kokuba ekugqibeleni azinikele ngokupheleleyo kubugcisa.
I-Mazen yaqala uhambo lwayo lobugcisa kwindlela yokupeyinta. Wabonisa umboniso wakhe wokuqala we-'Bonds 'e-Art Circle (eBeirut) ngo-2013. ziboniswe kwiGalari ye-392Rmeil393 (eGemmayze, eBeirut) nakwiDyunivesithi yaseBalamand Gallery (eLebhanon) ngo-2015. Ezi zilandelwe ngumboniso othi 'Emotion in Motion' e-Artspace Hamra (eBeirut) ngo-2016 eyayinomxholo othi 'The Eye' Iprojekthi yokufaka eneevidiyo ezintlanu ezibonisa ubudlelwane phakathi komntu kunye noluntu. 'Iliso' ngoku liyinxalenye yengqokelela esisigxina yeZiko loLondolozo lweMbali lale mihla kunye neleManje (MACAM) eAlita, Byblos, Lebanon.
UMazen uthathe inxaxheba kwindawo yokuhlala yobugcisa kwindawo ehlonitshwayo yePilotenkuche International Art Residency, eLeipzig, eJamani, ngo-2015. Oku kungamkhokelela ekubeni ekugqibeleni afudukele eJamani ngo-2017, kwaye oku kushukunyiswa kuya kuba nefuthe elikhulu kwisazisi sakhe njengegcisa. Uya kuqhubeka nokubhalisa njengomfundi otyeleleyo kwiAkhademi yoBugcisa oBuhle eLeipzig, esongeza kwimfundo yakhe.
UMazen ubhale umzabalazo wakhe wokuzinza kwilizwe elitsha ngeprojekthi yakhe 'Ndingumphambukeli', ebonisa imizobo emininzi kunye nokufakwa kwevidiyo ezimbini, ezaqala ukuboniswa kwi-GAPGAP eLeipzig ngo-2017 naseWerkStadt, eBerlin ngo-2020. ngemiboniso eyedwa ebandakanya 'ndiphela ukuqala' kwi-392Rmeil393 Igalari, eBeirut, ngo-2019, kunye 'neGumbi loLondolozo' kwiMyuziyam yaseDer Bildenden Künste, eLeipzig, nango-2019. Zombini ezi ziboniso ziphande nzulu iimvakalelo zomzobi malunga nesazisi sakhe kunye amava akhe njengomphambukeli. Ukuqhubela phambili ukuphonononga le micimbi kwakuloo nyaka, ukufakelwa kwakhe 'iSpot The Foreigner' yayiyinxalenye yeRe-Orient Exhibition eMyuziyam yaseGrassi, eLeipzig. NgoJanuwari 2020, uKhaddaj wabonisa 'iLützner Street 7', omnye umboniso wedwa, eAlbareh Art Gallery eBahrain. Ngo-Novemba ngo-2020, u-Khaddaj uthathe inxaxheba kuMnyhadala we-Kasseler Dokfest 37, e-Kassel, eJamani, ngeprojekthi ebizwa ngokuba 'ngabazobi abekhoyo' eyifakelo yevidiyo. Kungekudala emva koko, u-Khaddaj wawongwa ngeNtetho eHloniphekileyo 'yeeGcisa azikho' yijaji ye-Cube yeGolide yeKasseler Dokfest. Iingcinga eziBonakalayo yayisisihloko somfanekiso wakhe wokugqibela wokupeyinta owawuboniswa kwigalari yeKunst Kan eAmsterdam.
I-Mazen ikwathathe inxaxheba kwimiboniso eliqela, kubandakanya neLebhanon, Bahrain, Turkey kunye neJamani. Imizobo yeMazen ngumdlalo ophakathi koburhabaxa kunye nombala, ukungafihli nto kunye nokucaba. Umsebenzi wakhe ubonakalisa ingcinga yomntu kunye nokunxibelelana ngokubonisa, okubonakala ngathi kukhutshiwe kwaye kuchithakele, kunqumama kodwa kukhuselekile. Ukuqhubela phambili kwevidiyo kunye nokufakelwa kukwandiswa komsebenzi kwinqanawa; into ehambelana nomhlaba ongaphezulu iguqulela kwiifom ezinokuguquguquka.
UMazen Khaddaj ngoku uhlala eBerlin, eJamani, apho enza khona ubugcisa bakhe. Usenolwalamano olomeleleyo kuMbindi Mpuma kwaye uyaqhubeka nokuzibandakanya kwimisebenzi yobugcisa apho.
Nceda uqaphele: ukuthatha inxaxheba kwimisitho e-Oyoun okanye undwendwele imiboniso yethu, kuya kufuneka ukuba ube novavanyo olubi lwe-corona kwangolo suku okanye ubungqina bokugonywa / bokuchacha. Iimaski ze-FFP2 zinyanzelekile e-Oyoun kude kube kukwazisa esinye. Ulwazi oluthe kratya malunga nengqondo yethu yezempilo inokufumaneka apha.